Dry nosimende Plant, Dry Blender Machine, Powder Ukupakisha Machine - QuanHua
Dry nosimende Plant
Elikhulu Ready Mix Ordinary Dry nosimende Plant
Special Dry Powder nosimende Plant
QH-40 Series Dry Powder nosimende Plant
QH-60 Series Dry Powder nosimende Plant
Wall Putty Ukuxuba Machine
QH-20 Simple Wall Putty Ukuxuba Machine
QH-50 Okugcwele-Auto Wall Putty Ukuxuba Machine
Isichuse Yesigcilikisha yokukhiqiza
Ready Mix Khonka Plant
Dry Mix nosimende Plant
I-FULL-AUTO BLOCK MAKING MACHINE
SEMI-AUTO VIMBELA UMAKHINI
Umshini we-Blender owomile
Double Shaft gwedla mixer
Umshini Wokuxuba we-LDH
Iribhoni Mixer Machine
Uthuli Collector esiqongweni USilo
Vula Umlomo Bag imishini ukugcwaliswa
isikhwama Jumbo Ukugcwalisa Machine
Rotary nokupakisha umshini
Valve Bag Ukupakisha Machine
Valve Ukupakisha Machine
NE Chain Ibhakede elevator
TD Belt Ibhakede elevator
TH Chain Ibhakede elevator
Uhlelo Lokukhiqiza Isihlabathi
Umshini Wokuqothula Isando
Imihlathi Crusher Machine
Isitshalo Sokuchoboza Iselula
Uhlelo Lokwenza Isihlabathi
Okuzenzakalelayo sishaye kanye abaluphahleka machine
Nosimende sishaye Umshini
Wall abaluphahleka machine
Ukhonkolo Floor Ukugaya Machine
Umakhalekhukhwini Omnyama Wokukhiqiza Umugqa
Uhlelo lweRobotic Palletize
India Amaklayenti-15-auto Okugcwele nosimende ezomile mixer isitshalo
Malaysia Amaklayenti -25TH-Auto Okugcwele Dry usimende nosimende mixer isitshalo
Qatar Amaklayenti-10th ESIPHELELE AUTO Dry nosimende mixer BATSHALE
Russia Amaklayenti-30-auto Okugcwele nosimende ezomile mixer isitshalo
UAE Clients- 15 Semi-auto nosimende ezomile mixer isitshalo
Uzbekistan Amaklayenti-20 Okugcwele-auto Tower Uhlobo Dry nosimende Mixer Plant
Ifoni: + 86-18660118268
MIX Dry nosimende BATSHALE
QH-30 Simple Uhlobo Dry Mix nosimende Plant, it is wangenela ovundlile (kusebenza isitshalo ongaphakeme), ukusebenza kakhulu, operation elula, ukumboza indawo endaweni encane, kancane isisebenzi (2-3), impahla okusezingeni eliphezulu ukuxuba [.. ] Funda kabanzi
Tile ingcina yokukhiqiza
Isichuse ingcina yokukhiqiza isitshalo isetshenziswa ukukhiqiza Ceramic Tile ingcina, yamathebhu, ukushisa ukulondolozwa multiplexed ukusetshenziswa uhlelo ingcina nosimende, amatshe nosimende [..] Funda kabanzi
MIX NGOMUMO usimende BATSHALE
Mix ngomumo usimende isitshalo isetshenziswa ukukhiqiza izinga okusezingeni eliphezulu nezemvelo usimende Gypsum futhi Gypsum self-yokululama. I Gypsum usimende iyona yokululama eziyisisekelo. I impahla ebomvu [..] Funda kabanzi
Quan Hua Group izinze itholakala e Jinan, emzini iziphethu, kuba ibhizinisi emikhulu zokuhlanganisa ukukhiqizwa, ukucwaninga kwesayensi, yokuthengisa, kanye nokuthekelisa namazwe angaphandle ukuhweba. Le nkampani yasungulwa ngo 2003. ikheli lethu ifektri kuyinto Anqiu Shiquan Industrial Park, Weifang Idolobha, Isifundazwe Shandong, ihlanganisa indawo ka 200,000 square metres futhi endaweni ukwakhiwa 120,000 square metres, nabasebenzi 300, Manje ngokwakha uhlaka jikelele, izimboni ezinkulu ngokuyinhloko ukwakhiwa imishini, kulekelelwa kukhona ukufakwa nokwakhiwa.
SIYAJABULA YAKHO ukuxuba ISIXAZULULO abahlinzeki
Ngenxa umenzi eziholela ukuxuba ezomile nosimende isitshalo futhi umshini imishini yokwakha e china, sizibophezele ukuba iyahola ezobuchwepheshe nokusungula izinto futhi ngokuqhubekayo ngcono zonke izindawo zebhizinisi lethu. Isu lethu kusisiza athole isikhundla oqinile ezimakethe zomhlaba jikelele futhi kuqinisekisa ukukhula isikhathi eside. Quan Hua brand athandwa embonini futhi umshini wethu baye zithunyelwa Malaysia, eVietnam, eRussia, eKazakhstan, Uzbekistan, Mongolia, Qatar, Algeria, Egypt nakwamanye amazwe. Unqobile ukwesekwa yekhasimende futhi ozethembayo.
ISO kanye nesitifiketi CE
Perfect Ngemva-Sales Izikhungo
Amahora angama-24 ku-intanethi impendulo noma ushayele emuva
Izingxenye ezisele futhi okusheshayo- bafake izingxenye ukunikezela
Mahhala-ukuqeqeshelwa opharetha wakho
Uyini nosimende ezomile?
1. Ngokungafani umsebenzi-site ezigqulweni, nosimende ezomile ubizwa nangokuthi nosimende zangaphambi okuxubile, okuyinto ikhiqizwa ifektri ne izindawo ozinikele ku batching kwendingilizi ye izithako inqubo kakhulu-elawulwa. Ingasetshenziselwa ngqo nje ngokungeza amanzi e umsebenzi indawo.
2. It has izinzuzo quality kuyavumelana, yokusungula elawulwa, saving time zabasebenzi Izindleko. Ngokufaka ezahlukene amakhemikhali izithasiselo, it has izakhiwo esihle isibopho, ezishisayo kanye ukwahlukanisa acoustic, ukuqhuma kwegilo-ukubhodla ukumelana, workability, Amanzi-nokugcinwa, ukugqoka-ubufakazi, anti-ukugqwala, njll
3. nosimende Dry ingafanisa tinhlobo letehlukene izinto ezintsha ukwakhiwa ngokwenza ngcono ekwakhiweni. Lezi izindawo ezinhle ngcono hhayi kuphela izinga isakhiwo kanye ukuphila kakhulu, kodwa futhi wehlise ukusetshenziswa nosimende e ngezinga elikhulu.
4. Isidingo nosimende ezomile liye landa ngokushesha ngenxa sokunconywa yayo evelele uqhathanisa ne uyahlanya nosimende e umsebenzi-site.
Uma ungathanda ukwakha ezomile nosimende isitshalo yemboni yakho, yethu QuanHua Mixer Team izosebenzisa nobuchwepheshe babo okukhulu nolwazi lobuchwepheshe ukuklama ezintsha front-end zomklamo Dry Mix nosimende Industries.
Onjiniyela bethu wazibonela kakhulu ukunikeza ezomile ukuxubana isitshalo design, ukwesekwa qala-up, lokuxazulula inkinga, ukuqeqeshwa, yesibili umbono ukubuyekezwa kanye kabuha namasevisi ukwandisa ezomile ukuxubana nosimende isitshalo umthamo wakho. Uma usukulungele ukuze ufunde kabanzi mayelana nezinhlelo zethu, sizimisele ukukusiza ukuklanywa imfuneko sakho.
Sizimisele ukunikeza izindleko izixazululo ngempumelelo kanye nemikhiqizo izinga nge ukutjhentjha esheshayo kakhulu. Singabantu omunye ambalwa abaziqondayo ikhwalithi ukulethwa izidingo zamakhasimende ethu ezifuywayo international. izitshalo nosimende Dry enzelwe ukugcinwa engqondweni ezomile ukuxubana nosimende isitshalo usonkontileka ukulindela ku utshalomali.
QuanHua Mixer Izinsiza kusebenza Machine Factory ihlanganisa indawo ka 200,000 square metres futhi endaweni ukwakhiwa 120,000 square metres, kanye 300 abasebenzi abaqeqeshiwe. Zonke imishini umshini enza ngokuvumelana ISO9001 kanye CE ejwayelekile. Ngemva ekhiqizwa, zonke umshini ziyovivinywa ngokuqinile kuze iphelela kahle.
Umshini wethu zingase zidlulisele wokuhlola SGS nabanye, ngakho ohlangothini yakho ingase uhlele ukwenza ukuhlolwa ingakafiki imithwalo.
Ukuze isethi eyodwa ezomile nosimende isitshalo, ngaphandle motor zidinga siemens futhi zidinga izinyanga 2 isikhathi ukukhiqizwa, zonke ezinye umshini zisebenzisa izinsuku 30-45 isikhathi ukukhiqizwa.
Njengoba umholi yomhlaba wonke embonini, sinikeza amaklayenti isevisi iphakethe okugcwele angazamukela turnkey iphrojekthi amaklayenti. Sinikeza ephelele yokufaka nokwakhiwa amasevisi wonke imishini thina ukhiqiza ukunikeza. professional kanye kakhulu abanolwazi emkhakheni ze yethu sizibophezele wanelise izidingo amaklayenti ethu 'olukhuni kakhulu.
Izinsiza zethu kabusha ukufakwa kuhlanganise nokubekwa & ukuqondanisa kabusha & ukulungiswa, ukulungisa & kabusha ukufakwa services. Amakhono zihlanganisa uhlelo okuklama, imishini kulungiselelwa, imishini ezihambayo, uhlelo ziqalise & kokuthuma & iphrojekthi ukuphathwa & nezinye izinto zokusebenza ezahlukene ngayinye nezidingo ezithile.
Block ukwenza umshini
Igumbi 617, Flat F, Cha 9999, Jingshi Road, Lixia District, Jinan Idolobha, Isifundazwe Shandong, China
Anqiu Shiquan Industrial Park, Weifang Idolobha, Isifundazwe Shandong, China
Wall Putty Ukuxuba Machine, Dry Powder Blender Mixer , Okuzenzakalelayo Dry nosimende Plant, Dry nosimende Ukuxuba Machine Nge yesikimu Coat , Dry Powder Mixer Machine , Ldh Plough Mixer Machine ,